Maitiro ekuisa Apple Ruzhinji Betas pane ako zvishandiso | IPhone nhau
Maitiro ekuisa Apple Ruzhinji Betas pane ako zvishandiso
Apple yakatotanga chirongwa chayo chePublic Beta cheIOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 uye macOS 11 Big Sur kuitira kuti vashandisi vanoshuvira kuisa maBetas pamidziyo yavo. Iwe unoda kuziva nzira yekuedza ese aya matsva emahara uye pasina kuve unogadzira? Isu tinotsanangudza kwauri nhanho nhanho.
Kwemakore mashoma, Apple yakabvumidza chero munhu kuisa maBetas pamidziyo yavo pasina kubhadhara account yekuvandudza. Nenzira iyi unogona kuyedza nhau dzinounzwa neremangwana remangwana vasati vaburitswa zviri pamutemo. Kana iwe uchida kuisa idzi nyowani shanduro dzinozosvika mumidziyo yedu mumatsutso pasina kubhadhara chero chinhu, uye pasina kutora mavhidhiyo kubva kune asina kuvimbika mawebhusaiti., Iyi ndiyo sarudzo yakanakisa. Muvhidhiyo iwe unogona kuona ese matanho ekunyoresa zvishandiso zvako uye nekudaro unokwanisa kuisa aya matsva.
Panguva ino chete maIOS 14 uye iPadOS 14 Betas aripo.Public Beta chirongwa ichi zvakare chinosanganisira watchOS 7 uye macOS 11 Big Sur, asi haasati awanikwa. Zvinotarisirwa kuti havangatore anopfuura mazuva mashoma kuti vadziise uye maitiro acho achave akafanana neaya akatsanangurwa muvhidhiyo. Iyo webhusaiti yeApple Ruzhinji Beta chirongwa chiri https://beta.apple.com uye kubva ipapo Iwe unongofanirwa kutevedzera nhanho dzatinoratidza muvhidhiyo kunyoresa chishandiso chaunoda.
Gara uchiyeuka kuti Beta ishanduro yesoftware iri kuvandudzwa uye kuti nekudaro haina isina bugs, muchokwadi, zvakajairika kuti zviripo. Yepamusoro bhatiri kunwa, kunyorera kusingashande, kuvhara kusingatarisirwi, kuchinjisa kwechigadzirwa ... Zvese izvi zvinogona kuitika chero nguva, saka hazvikurudzirwe kuti zviiswe pazvinhu zvikuru zvaunoshandisa mazuva ese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuisa Apple Ruzhinji Betas pane ako zvishandiso
Maitiro ekumisikidza mabasa nemapombi muIOS 14
Twitter inomira ichipa zvigadziriso kumidziyo inochengetwa neIOS 11